Afro Volo Volo: Endrika: Hairstyles, Best Products & Trends For 2020?
Afro volo volo na ny Afro manala baraka Ny fijery dia mihamitombo hatrany amin'ny lazan'ny lazaina! Hatramin'ny nanombohan'ny revolisiona voajanahary voajanahary tao amin'ny 2007, ny tanjon'ny natiora sista rehetra dia ny mametraka volo ho lehibe sy marevaka araka izay tratra! Noho izany dia mihodina ny afro mahamenatra amin'ny voninahiny manontolo! Ny volon'ny Afro dia volo voajanahary izay manana endrika kanto na kofehy tsara tarehy izay mihalehibe sy mivoaka toy ny Afro nentim-paharazana, saingy manana endrika manjelanjeloka fa tsy endrika marevaka. Ny sasany amin'ny natiora dia manamboatra ny afro mangatsiatsiaka ao am-po fa tsy afro, ary tsara tarehy izany.
1.1 AHOANA NO HATAONTSIKA NY FITIAVANA AFRIKA AFRIKA?
2 Ahoana ny fomba hanamboarana ny voloko mainty?
4 HUMAN HAIR fanitarana & Perikopa
4.0.2 Manantena aho fa nanampy izany. Hatramin'ny manaraka dia sis!
Ny volon'ny Afro manala baraka dia voatery midika foana hoe mila taona maro hanamboarana karazana 4. Na izany aza, niaraka tamin'ny fandrosoana vao haingana tao amin'ny peratra, Clip-ins ary kinky ny fanitarana ny volo, ity fomba fijery ity dia mbola tsy voajanahary firy intsony. Tsy vitan'ny hoe afaka mandeha haingana fotsiny ianao ao anatin'ny 10 minitra, fa tsy mampaninona ny tolo-bolo vita amin'ny sainao. Azonao atao ny manala ny fijerin'ny Afro Curly amin'ny fanitarana. Raha efa voajanahary ianao, manoro hevitra aho ny hametraka ny horonan-tsarimihetsika. Raiso ny clip izay manamaivana ny endriny amin'ny volo voajanahary anao satria azonao atao mora foana ny manodina ny lamosin'ny tadiny amin'ny kofehy na ny bantu Bantu, izay hanazavako aoriana. Raha toa ianao ka manana lozam-pamokarana tena marefo toy ny 3a 3b, dia ho sarotra ny hahita ny kiraro afro hijery raha tsy vitsy ny volonao. Ho anao divas, manoro tsikombakomba amin'ny sehatra nentim-paharazana aho ary fanidiana. Na ny tsipika fohy Nubian. Ny lamaody tsara indrindra ampiasaina dia ny Kinky Curly, Coily na ny Afro Kinky fanangonana satria hanome azy ny tsara indrindra Afro Curly!
AHOANA NO HATAONTSIKA NY FITIAVANA AFRIKA AFRIKA?
Ny fomba tsara hanatrarana ny fomba fijery tsara indrindra Afro dia ny manaraka ireo torohevitra mora ireo. Ny zavatra manan-danja tokony hodinihina rehefa mamolavola ny fijerinao dia ny mitadidy fa faharetana ny faharetana. Ny fampiroboroboana ny volonao dia mitaky fotoana (be dia be sy fotoana be LOL) na izany aza dia hamela anao amin'ny tsiambaratelo vitsivitsy hamoizako azy io mandra-panao azy! Andao isika hanomboka
Ahoana ny fomba hanamboarana ny voloko mainty?
Raha lava sy lava ny volonao voajanahary, dia tsy mora ny manala izany. Efa manana teboka voajanahary 3c na 4a ianao fa tsy ny fanasana sy ny fandehanana dia mety ho ampy hanatrarana izany fomba izany. Na izany aza, raha manana 4b 4c ianao volo, dia mety ho sarotra izany hanatrarana Io tsara indrindra afro manala baraka. Raha tokony ho izany dia mila manao tsiranoka ianao na Bantu knots mba hanodina ny modelinao.
Misy lesona video mampiseho ny fomba fametrahana azy Afro kinky mampihomehy clip eto amin'ity pejy ity mba hamoronana afovoan-taolam-paty afro ambany!
Ity tora-toetra ity dia notadiavina taorinanaoe amin'ny lazany vao haingana amin'ny fiarahamonina Afrikana Afrikana.
Raha tsy manana ny hateviny na ny lavany ianao mba hisintonana ny afro manala baraka, dia azonao atao foana ny mampiasa clip clip. Mitadiava fanitarana voajanahary izay mifangaro amin'ny anao tena tora-tavy, izay tena manan-danja tokoa; Raha tsy izany, ny volonao dia tsy hitombo tsara. Manoro hevitra aho mba hahazoana loko fohy mba hahatonga ny volo hahatonga ny vokatra haingana. 10 "na 12" dia miasa tsara indrindra ary mila X4XX-1.5 andalana klips. Ampiharo ny horonantsary manerana ny volonao. Amin'izao fotoana izao ny manamboatra sy manamboatra ny volony. Mba hahazoana ny fijery manjavozavo dia mila manodina ny volony ianao na mamorona ny kibony Bantu endrika bouncy curls. Mora haingam-pandeha haingana kokoa, ary mora kokoa ny mampihatra ny clips amin'ny alina, manodinkodina ny volom-borona ary manalava izany maraina izany. Na izany aza, ny kibon'i Bantu dia mamorona ny endrika tsara indrindra amin'ny endriny afro. Ny fahalavoana amin'ny fanaovana ny bantu ny fehikibo dia ny fangalany mandrakizay ny maina ary mety hipetrahanao eo ambany fiara. Ny tena zava-dehibe tokony hodinihina rehefa miezaka ny mahatsapa fialamboly mahafinaritra dia ny misoroka mafy sy mavesatra mofomamy. Izany dia miantoka ny fampihenana ny fakana an-keriny ary mamela ny volonao Afro ho menatra mba ho lasa mora kokoa ho an'ny fanolokoloana.
HUMAN HAIR fanitarana & Perikopa
Ny fomba tsotra sy mandroso indrindra hahazoana ny fijery afro manala baraka dia ny fampiasana parochie! Azonao atao ny manatratra karazana, loko, endrika, ary lamosina izay tsy tianao amin'ny ezaka tsotra fananganana kofehy mpivaro-kibo mahamenatra toy ity!
Manoro hevitra aho amin'ny fanandramana ny "Short Nubian Coil Perigre" Afaka mamolavola sy mamaritra ny fehikibo toy izany koa ianao amin'ny fanaovana fampivelarana toy ny fampiasana Afro kinky volo. Azonao atao ny manasa sy mandehandeha toy ny fikorontanan'ny toetr'andro toy ny fanindron'ny fanodikodinam-bokatra sy ny bokotra Bantu fananganana afro crochet hair.
Tsy maintsy mampiofana mazàna ny volo ianao mba hahatonga azy io ho azo tanterahina mandritra ny fizaran-taona rehetra. Na izany aza, amin'ity fahavaratra ity, miharihary fa mety ho ny làlana tsara indrindra ny fomba fiarovan-tena miadana. Na dia mety ho izany aza, dia tiantsika rehetra ny maneho ny hadisoantsika Tress! Iza no maniry ny fiarovan-tena amin'ny fotoana rehetra ??? Raha te-hikolokolo ny volonao Afro volo ianao na manosihosy anao amin'ity fahavaratra ity, ataovy azo antoka fa mitazona ny tendanao ianao.
Ny fampiasana ny kalitaon'ny kalita dia afaka manohy lavitra. Andeha hojerentsika izany, ny fanangonana ny volonao dia mety hitarika, indrindra raha maina na tsy ampiasaina amin'izany. Na izany aza, miaraka amin'ny habetsaky ny tsy fitoviana, dia manomboka ho lasa maharitra kokoa ianao mba hahatonga azy ho mora mahazo aina na dia eny an-dalana aza. Na izany aza dia manoro hevitra ny fampiasana fialan-tsasatra iray izay mifanandrify tsara amin'ny modelinao ianao ary maka avy amin'ny fotony. Alefaso moramora avy amin'ny fotony ary asio. Izany dia hamorona vola bebe kokoa ary hanampy ny volonao hitsangana mba hahatonga ny fijery afro manala baraka! Raha volo ny volonao dia hahazo ny tsara indrindra afro ianao amin'ny fanangonana ny volonao amin'ny moron-tongotra avy eo amin'ny fakantsary eo afovoan'ny volo volo aorian'ny sombin-drongony na Bantu ny knot!
Manantena aho fa nanampy izany. Hatramin'ny manaraka dia sis!
Karazan-tsakafo tsara indrindra ho an'ny lehilahy mainty hoditra
Mieritreritra ny mandeha blonda? Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy!